Xidiga Kooxda Paris – St Germain Neymar Jr Oo Ka Hadlay Waxa Uu Ka Cabsi Qabo Kadib Marka Uu Dib Ugu Laabto Garoomada – GOOL24.NET
Xidiga Kooxda Paris – St Germain Neymar Jr Oo Ka Hadlay Waxa Uu Ka Cabsi Qabo Kadib Marka Uu Dib Ugu Laabto Garoomada
Xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda Paris – St Germain Neymar Jr ayaa wuxuu ka warbixiyay waxa uu ka walwalsan yahay kadib marka uu dib ugu laabto garoomada mudo dhan 3 bilood uu dhaawac kaga maqnaa tan bishii February ee lasoo dhaafay.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay xidiga xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr kadib markii uu sheegay: “Waa xilli adag, waana mid ka mid ah waqtigii ugu adkaa ee aan wajaho, waxaan cabsi xoogan ka qabaa in uu hoos u dhac ku yimaado qaab ciyaareedkeyga kadib marka aan dib ugu laabto garoomada.
Neymar Jr ayaa wuxuu hadalkiisa intaas sii raaciyay: “Waxaan ka war qabaa in qof walaba uu dareemayo wal wal, laakiin ma jirto cid iga walwal badan, kadib marka aan kasoo kabtay dhaawacii aan qabay”.
Mudada uu Neymar Jr dhaawaca kaga maqnaa garoomada wuxuu si aad ah ugu tiirsanaa qoyskiisa iyo asxaabtiisa, taasoo ah sababta uu u go’aansday in dhaawaciisa uu kaga kabto dalkiisa hooyo ee Brazil.
Xidiga kooxda Paris – St Germain ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray: “Dadka reer Brazil waxay igu caawiyeen shaqadeyda maalin kasta, taasoo iga caawisay inaan ka gudbo cadaadiska I saarnaa, fikrado badan oo ku jira madaxayga, waan ka baqayaa”.
Waxaa jira warar dhowaan soo baxay e sheegayay in Neymar uu ku biiri doono Real Madrid kadib marka uu furmo suuqa kala iibsiga, kaliya hal xilli ciyaareed ka dib markii uu Barcelona kaga soo dhaqaaqay PSG oo bixisay aduun dhan 222 milyan euro oo ay ku kansashay heshiiskii uu ku joogay Cump Nou.